Football bụ egwuregwu na-mmasị site na onye ọ bụla irrespective nke ihe mmadụ ji ọgbọ. Ọ ga-abụ ọjọọ na-ekwu na ọ bụ onye a ma ama egwuregwu niile mara egwuregwu na ụwa. Ya mere, na-eburu echiche onye ofufe na-esonụ nke football, egwuregwu ndị na-emepụta e mere ọtụtụ egwuregwu na a na isiokwu na ụfọdụ nke n'elu android football egwuregwu na-depụtara ebe a.
1. mbụ Touch Soccer 2015
Platform: Opekempe OS chọrọ ma ọ bụrụ na Android 4.0 na elu.
Nke a ụtọ na ihe ịma aka egwuregwu nwere adị mfe na-egwu ma ọ bụ a bit ike ukwu. Swiping na agba bọl maka ihe mgbaru ọsọ ga-eleghị anya na-eme ka ọkpụkpọ riri ahụ nke a egwuregwu.
Platform: Opekempe OS chọrọ maka egwuregwu bụ Android 2.2 na elu.
Ọ bụ nnọọ ihe ọhụrụ play nke football. Ebe a, kama nke na-eme a na-emeri play, ọkpụkpọ bụ na ịma aka nke na-emeri megide amụba otutu zombies otú kama ilekwasị anya na ha na-amụba ọnụ,-elekwasị anya na-eme ka obi ụtọ tie isi ha iji mee ka ha nwụrụ anwụ.
Platform: Android 2.3 na elu bụ kacha nta OS chọrọ maka egwuregwu.
Ọ na-enye ọkpụkpọ a nnwere onwe nke na-eme ụwa otu egwuregwu kacha mma na na na kasị mara amara nyiwe na stadiums.
Platform: Opekempe OS chọrọ bụ android 2.3.3.
Nke a football egwuregwu n'ihi na Android, na-enye ihe ọkpụkpọ ohere egwu egwuregwu site n'ịhọrọ na egwuregwu nke katuunu ịke na-eme ka a otu na ga-akpọ irite ọzọ na ndị ọzọ ụgwọ ọrụ. Na ụzọ ịga nke ọma, ọkpụkpọ nwere ike imeri na ịzụta ihe ihe maka ihe dị ike na oru oma otu.
5. kpatụ aka gaa na Gbaanụ 2
Platform: Android 2.3 na elu
Na-enweta ihe ndị magburu onwe na kacha football ebre ahụmahụ na "kpatụ aka gaa na Gbaanụ". Nzọụkwụ mbụ bụ iji wụnye egwuregwu ka Android ngwaọrụ na mgbe ahụ na-enweta free kicks dị iche iche ụdịdị nke egwuregwu ka onye obi ụtọ, ndorondoro, Arcade, Mgbaru Ọsọ Post na ụfọdụ ndị ọzọ.
6. Top iri na otu Ịbụ a Soccer Manager
Platfrom: Opekempe OS chọrọ bụ Android 2.2.
Player Na-eme ka a otu, azụ ndị otu na aka ụwa nke football Player nke egwuregwu a, online. Ebe a, ọkpụkpọ ga-aba ụwa nke online egwuregwu asọmpi, n'asọmpi na leagues wdg
Kacha nta OS chọrọ bụ Android 2.3 na elu.
• http://www.amazon.com/Gameloft-Real-Soccer-2013/dp/B009WQ5FD0/ref=sr_1_2?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1436724979&sr=1-2&keywords=real+football+2013 &
Banye a n'ezie ama egwuregwu, fọrọ nke nta. Nke a na-emelite egwuregwu version nke 2012 football egwuregwu nwere ire ụtọ na ọtụtụ ezi uche ndịna-emeputa na-eme ka ọkpụkpọ-eche dị ka ọ / ọ bụ kpakpando nke egwuregwu na a ezigbo ụwa.
8. kpatụ aka gaa na Kick Football Kickoff
Platform: Opekempe OS chọrọ maka egwuregwu bụ Android 2.3 na elu.
Agaghịkwa na obi ụtọ anya na-eme ka ihe mgbaru ọsọ na kpatụ aka gaa na nke a mkpịsị aka. Ọ bụ n'ezie ezi enyi na-enwe oge ntụrụndụ. Nwere fun na cartoonist ịke Player na football n'ala.
Platform: Opekempe OS chọrọ bụ Android 2.3 na elu.
Ọ ka dọtara ọtụtụ nde ndị ọkpụkpọ na ya pụtara atụmatụ dị ka 3D ámá egwuregwu nhọrọ na 6 dị iche iche ụdịdị nke egwuregwu gụnyere; Imeri Euro, Obe na obi ụtọ, ẹmia elekere, iti ndị eche gọọlụ na ọnwụ mberede mode.
Platform: Android 2.3.3 bụ kacha nta OS chọrọ.
Dị ka football bụghị nanị banyere free kicks ma a ọtụtụ atụmatụ na azum nwekwara nke dị oké mkpa ihe ịga nke ọma egwuregwu. Ya mere, na egwuregwu a na-elekwasị anya nlekọta si eme kama n'ezie egwu na ala.
> Resource> emulator> Top 10 Football Games maka Android Ọrụ